नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका कर्म ग्याल्बो लामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित !
ARCHIVE, COVER STORY » नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका कर्म ग्याल्बो लामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित !
काभ्रेपलान्चोक- नमोबुद्ध नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका कर्म ग्याल्बो लामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतबाट उम्मेदवारहरुलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कर्म ग्याल्बो लामा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।
नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं 1को अन्तिम मत परिणाम ! बिहिबार सकिएको मतगणणाको अन्तिम परिणाम हेर्ने हो भने एमालेले ४४९ मत ल्याउँदा कांग्रेसले ५०८, माओवादी केन्द्रले १४५, राप्रपाले ५ र नयाँ शक्तिले १४ मत ल्याएका थिए ।
यता काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको मेयर पदका लागि भने मतगणना जारी छ । मेयरको लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तीब्र प्रतिष्पर्धा छ । जसमा एमाले अगाडी छ ।
यता रोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका दलबहादुर लामा विजयी भएका छन्। ४ हजार ३ सय ४२ मत ल्याएर उनी अध्यक्ष पदमा विजयी भएका हुन्।
प्रकाशित : Thursday, May 18, 2017